क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भन्छन्- हिरासतबाट छुटेको झैँ भयो! – उजेली न्यूज
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भन्छन्- हिरासतबाट छुटेको झैँ भयो!
प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७७, शनिबार ०८:०२
हेमन्त केसी , जेठ १० । करिब २१ दिन हिँडेर जाजरकोट सदरमुकामस्थित भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा शुक्रबार बसेका लोकेन्द्र सिंहमा खुशीको सीमा छैन।
चौरजहारी नगरपालिकाबाट तीन हजार २४४ जना भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्न गएका छन्। उनीहरु घर फर्कन शुरु गरेको र शुक्रबार मात्र ३४ जना भित्रिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। उनीहरुलाई सम्बन्धित वडामा पठाइएको छ। रासस
Previous: बिक्री भएन कृषकको मह
Next: त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि